» फेरि एक पटक बलिदानीपूर्ण आन्दोलनको आवश्यकता छः बाबुराम भट्टराई , सहि या गलत ? हेर्नुहोस भिडियो फेरि एक पटक बलिदानीपूर्ण आन्दोलनको आवश्यकता छः बाबुराम भट्टराई , सहि या गलत ? हेर्नुहोस भिडियो – हाम्रो खबर
फेरि एक पटक बलिदानीपूर्ण आन्दोलनको आवश्यकता छः बाबुराम भट्टराई , सहि या गलत ? हेर्नुहोस भिडियो
admin 1464 Views
फेरि एक पटक बलिदानीपूर्ण आन्दोलनको आवश्यकता छः बाबुराम भट्टराई ! के यो सहि हो त? हेर्नुहोस भिडियो…
प्रधानमन्त्रीको प्रचण्डलाइ प्रश्न : जनताले के बिगारे र, नेपाल बन्द गरेको? हेर्नुहोस भिडियो
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनतालाई दु:ख दिने नियतले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड-माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपाले बन्द आह्वान गरेको बताएका छन्।
नेपाल भूमिहीन सुकुम्बासी संगठन केन्द्रीय कमिटीको राजधानीमा आयोजित राष्ट्रिय भेलामा बुधबार बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले जनतालाई दु:ख दिने कुनै पनि गतिविधि स्वीकार्य नहुने भन्दै यस्तो काम नगर्न सुझाएका छन् ।
नेपाल बन्द अरे। जनताले के बिगारे र, नेपाल बन्द गरेको? जनतालाई किन दुःख दिनुपर्‍यो नेपाल बन्द गरेर? पार्टी छोडेर आफू पाटीमा लाग्छन् अनि बन्द गरेर जनतालाई दुःख दिन्छन्, बन्द भनेको के? त्यो किन गर्नुपर्‍यो, के का लागि गर्नुपर्‍यो?, उनले प्रश्न गरे।
प्रधानमन्त्री ओलीले जनतालाई दुःख दिन के का लागि भन्दै प्रश्न गरे।
बन्द के का लागि गर्नु, किन बन्द गर्नु? बन्द भनेको हिँड्डुल गर्न नपाइने, पसल खोल्न नपाइने भनेको हो, किन्न जान नपाउने, पढ्न जान नपाउने, जनतालाई दु:ख दिने काम गर्नु भएन’, उनले भने, ‘के का लागि गर्नुपर्यो बन्द? जनताले बन्द गरेको होइन र जनताले चाहेको पनि होइन।’
गायिका आस्था राउत पनि विवाहको तयरिमा लागिन ! को हुन त हुनेवाला बेहुला ? हेर्नुहोस
काठमाडौ । अहिले कलाकारहरुको धमाधम विवाह हुँदैछ । नायीका स्वेता खड्काले हालै विवाह गरिन् । अब गायिका अञ्जु पन्त विवाहको तयारीमा छन् । उनको विवाहको लुगा पनि तयार हुँदै भन्ने समाचार सार्वजनिक भएका छन् । यता अर्की गायिका आस्था राउत विवाह गर्ने तयारीमा जुटेकी छिन्।
“सांगितिक क्षेत्रमा राम्रो स्थान बनाएकी आस्थाले अब आफ्नो विवाहको योजना बनाएको स्वीकार गरेकी छन् । उनले भनिन्, करियरका साथै म आफ्नो व्यक्तिगत जीवनको बारेमा पनि सोचिरहेकी छु ।
“किनकी जीवनमा कोही न कोही चाहिन्छ । त्यसैले अब बिहे गर्ने सोच आइरहेको छ। उनको रोजाई को हो भन्ने प्रश्नमा उनले, म र मेरो म्युजिक क्षेत्रलाई बुझ्ने इमान्दार र विश्वाससिलो मान्छेसँग बिहे गर्ने सोच बनाइरहेकी छु।